Waxa uu noqday mid ka mid ah arrimuhu weyn oo si aad u daawato videos on hindisooyinkayaga mobile maalmahan iyo tirada ama dadka isticmaala weli waa korodhay. Arrimaha keenaya dhinaca shaqada ah nidaamyada daawashada waa dabacsanaan, dhaqdhaqaaqa iyo raaxadeeda. Waxaa macnaheedu ma aha in aan gebi ahaanba ka baaraandegaya caado hore ee daawashada cajaladaha on a TV, desktop ama laptop, kaliya in ay ku dhamaadka hoos u dhac. Haddii aad iska tiro cayiman oo maalmo badan tahay doonaa waxaad u baahan tahay in aad laptop agagaarka tahay, haddii kale, waxa ay noqon doontaa wax badan oo ku saabsan fududee inuu u dhaqaaqo la casriga ah ama kiniin ah (ama labadoodaba waqtiyada). Tan ugu muhiimsan, waxaa jira in ka badan, wax badan oo dheeraad ah si videos online daawado marka la barbar dhigo TV (haddii aad doonaysaan inaad u cusboonaynta mid ka mid ah kuwa-dhigay hogaanka sanduuqyada / qaybaha tahay). Sidaas oo kale, ma tahay in aad u socoto si ay u fuliyaan TV ku wareegsan, ma tahay? Bal aan noqon wax ku ool ah oo macquul ah, eegno sida aad u heli karto naftaada ku xiran internetka.
Haddii aad jeceshahay ku habboonaan iyo dhaqdhaqaaqa ee internet-ka, aad leedahay asal ahaan labo doorasho, Wi-Fi ama Mobile Data. Waa dhab ahaantii, arrin subjectivity shakhsi.
Waa kuwee ka mid ah?
The xawaaraha iyo xiriir waa ka xasilloon
Qiimaha ayaa qiimihiisu (ku salaysan xirmo xogta per Times bil kasta)
Xawaaraha dajinta iyo heerka waa ka dhaqso
Habboon ee loogu talagalay-dhererka buuxa iyo degsado videos
Iska ilaali inaad isticmaashid ilaa lacagta xogta mobile ee
Dheecaan yar ee nolosha batari
Mobile Data / Gacanta Data
Waxaa mar walba la heli karo, meel kasta oo
Haboon marka la soo gaabiyo clips video
Waxay ku xiran tahay bixiyaha shabakadda deegaanka, qorshaha xogta qaar ka mid ah waxay bixiyaan isticmaalka xad lahayn
Lacagta kala duwan marka loo eego Wi-Fi (sida in 2G / 3G / 4G)
Hababka Daawashada Videos on Qalabka Mobile
All oo inaga mid ah waxay u muuqdaan in ay daawadaan video ka duwan; qaar ka mid ah door bidaan in ay si toos qulquli, kuwa kale helaan waxyaabaha ku dhex app ciyaaryahan video ah, halka inta kale uu doonayay in lagala soo bixi gal qalabka gacanta u offline loo maqli karo. Si fudud u maraan adiga oo u mara tab ka mid ah hababka hoos ku qoran wixii faahfaahin ah oo dheeraad ah.
Download gal Devices
Geeyo Direct, sida magaca nafsad ahaantiisa ayaa soo jeediyay, waa habka ugu toos ah daawashada video ah oo ku saabsan qalabka telefoonada gacanta. Uma baahnid in aad ka soo dejisan ama la rakibo wax. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad ku xiran internetka, sidoo kale iyada oo Wi-Fi ama xogta mobile.
Tallaabada 1. Search isticmaalaya browser
Iyadoo ku xiran habka hawlgalka qalab mobile, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Firefox, Chromecast, Internet Explorer ama Safari si aad u baadhid aad goobaha video jecel.
Ku qor magaca aad video goobta uu jecel yahay, ama
Search by the video ee horyaalka / Magaca
Tallaabada 2. Radidiyaha la dhisay-in ciyaaryahanka video
Marka aad riixi ku PLAY button, video ay si dabiici ah u bilaabi doonaa in loo maqli karo. Haddii ay diido in ay sidaa sameeyaan, waxaa laguu keenay in doonaa fariin qalad ah. Waxaad isku dayi kartaa si fudud u soo xal ugu ah arrimaha loo maqli caadi naftaada.
Riix PLAY on your video xushay
Video wuxuu bilaabi doonaa ciyaaro, ama
Waxaad u baahan doontaa inaad doorato video ciyaaryahan si ay u isticmaalaan
Waxaa jira laba nooc oo Chine ciyaaryahan video; app rasmi ah goobaha online / geeyo gaar ah ama dibedda ah (Xisbiga 3-deedii) app. Waxaad u baahan doontaa in aad soo baxdo iyo rakibi ciyaaryahan video app / s ee ku saabsan qalabka / s mobile ka hor ka hor inta aanad si dhab ah u isticmaali kartaa. Xasuuso inaad sidoo kale waxa ay sii-to-date. Haddii kale, waxaa laga yaabaa in u nugul shilalka inta lagu guda jiro loo maqli karo.
Xulashada 1. Official Video Player Apps
Iyada oo ku xidhan nidaamka hawl gal, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi app ciyaaryahan video ah mid ka mid ah oo ku saabsan Google Play (ee Android) ama Lugood (ee macruufka). Haddii aad ka welwelsan tahay ee soo degsado mid qalad ah, si fudud u soo guurin ka website-keeda rasmiga.
Download app ciyaaryahan video ah (Android / macruufka)
Burcad app iyo dhirtuba ay u video ah (by horyaalka / category)
Dooro video oo guji PLAY inuu ku soo bilowdo daawashada
Fiiri qaar ka mid ah barnaamijyadooda caanka ah ciyaaryahanka video rasmi ah laga heli karo.
Xulashada 2. Dibadda (3-dii Party) Video Player Apps
Users mararka qaar door bidaan in ay isticmaalaan ah ciyaaryahanka video app dibadda sababo kala duwan; si fudud arrin doorashada, qaababka fiican bixiyo (ie inaad kala soo baxdo iyo badbaadin video eee ay qalab mobile), arrimaha loo maqli karo (ie qaab faylka ama codec ma aqoonsan) iyo wax ka badan.
Video wuxuu bilaabi doonaa ciyaaro (haddii aad qotomisay ciyaaryahan by default), ama
Fiiri qaar ka mid ah barnaamijyadooda caanka ah ciyaaryahanka video dibadda laga heli karo.
Haddii aad qorsheyneyso in ay daawadaan ah dhererka-full video, waxaa laga yaabaa in doorasho ka xigmad inaad kala soo baxdo waxa ay u gal qalabka aad mobile. Haddii, aad waxba kama qabo waxa ay qaadato lacagta xogta aad. Marka laga reebo in, sidoo kale iyaga (sidoo kale muddo dheer ama gaaban videos) waxaad kala soo bixi kartaa offline la daawado. Waxaana jiri doonta carqalad yar ee loo maqli karo marka la barbar dhigo geeyo si toos ah sababtoo ah ma ku xiran xawaaraha iyo tayada xiriir Internet aad.
Tallaabada 1. Daahfurka ciyaaryahan video app
Raadi video ah oo ay horyaalka / magaca
Raadi warka soo DOWNLOAD button ama icon
Guji ku yaal oo bilaabi doonaa in ay kala soo bixi
Feature download ayaa laga yaabaa in aan la heli karo ciyaaryahanka video kasta app, si aad isku dayi kartaa mar kasta ka baxsan barnaamijyadooda kale.
Tallaabada 2. Watch bixi video
Ayaa soo bixi videos hadda ku kaydsan gal qalab mobile, waana la heli karo iyada oo sidoo kale aad file bixi ama in ka playlist ciyaaryahan video aad app.
Fur faylka ama playlist ay ku jiraan video ah
Dooro iyo guji PLAY
Video wuxuu bilaabi doonaa ciyaaro
Haddii aad kala kulantay arrimaha loo maqli kasta, hubi qaar ka mid ah xal halkan.
> Resource > Video > Sidee-To Watch Videos on Qalabka Mobile